Akpa kacha buru ibu ma dịkwa gịrịgịrị na -apịachi igwe na -emepụta ihe na ụlọ ọrụ | UBL
Uwe dị mma
T-shirts siri ike ma dị gịrịgịrị, sweta, jaketị, uwe na-ekpo ọkụ, sweaters, uwe elu, jaketị, traụza, wdg
1. Usoro akụrụngwa a nwere ihe nlereanya bụ isi FC-M412A, nke enwere ike iji akwa akwa na aka ekpe ozugbo, tụgharịa ogologo otu ma ọ bụ ugboro abụọ, na-enye akpa rọba akpaka na akpaaka.
Mkpakọ akpa akpa na -ebi akwụkwọ na akara
mpịachi akpa na -arapị akara
mpịachi bagging ọkụ ịkpụ akara
mpịachi bagging tearing akara
Akwa uwe dị gịrịgịrị na -apịachi, akpa, ịdọka, akara, ịkpakọba
Ụdị FC-M412A, Enwere ike ịhazi agba igwe
Ụdị uwe T-uwe elu, uwe elu Polo, uwe akwa, ọsụsọ, uwe elu, uwe ogologo ọkpa, sweta wdg.
Akpa ọdabara akpa awara awara, akpa rọba
Obosara akwa Tupu mpịachi: 300 ~ 900mmMgbe mpịachi: 170 ~ 380mm
Ogologo uwe Tupu mpịachi: 400 ~ 1050mmMgbe mpịachi: 200 ~ 400mm
Ogo igwe na ibu ya 7200mm*W960mm*H1500mm; 500KgEnwere ike ịtọpụ ya n'ọtụtụ ngalaba
1. Nhazi usoro akụrụngwa bụ sayensị, dị mfe, ntụkwasị obi dị elu. Ndozi, mmezi adaba ngwa ngwa, dị mfe ma dịkwa mfe mmụta.
2. Ihe nlereanya nke akụrụngwa na ngwakọta ngwa ọ bụla dabara adaba, na njikọta ọ bụla, akụrụngwa nwere ike bụrụ ogo na -apụ apụ n'ime mita 2 nke ahụ ụgbọ njem, ọkwa mbuli elu nke ụlọ ọrụ nwere ike ibuga elu na ala.
Eserese onyonyo nke ndị ahịa
Nke gara aga: Nchedo uwe Ịwa akwa mpako mpịachi igwe
Osote: Mkpa uwe na -apịaji igwe mbukota
Ngwa mbukota akwa, Onye na -enyocha karama, Onye na -enyocha karama mmanya, Igwe nyocha akara, Onye na -enyocha karama, Onye na -enyocha karama biya,